Ian Wright oo u sheegay Manchester City hal arrin oo ay ku qurxin karto xilli ciyaareedkeeda – Gool FM
Ian Wright oo u sheegay Manchester City hal arrin oo ay ku qurxin karto xilli ciyaareedkeeda
Dajiye February 4, 2020
(Manchester) 04 Feb 2020. Weeraryahankii hore xulka qaranka England ee Ian Wright ayaa sheegay in iyadoo ay Liverpool ku sii dhawaaneyso ku guuleysiga koobka horyaalka Premier League, ay tahay Manchester City in ay xooga saarto hanashada koobka horyaalada Yurub ee Champions League, isagoo carabka ku adkeeyay in tani ay ka dhigi karto Sky blue ay xilli ciyaareedkan guul kaga dhameysato.
Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa Axadii lasoo dhaafay Magaalada London ku soo garaacday Man City oo marti u ahayd, waxaana ay uga soo adkaatay 2-0, taasoo ka dhigtay in Sky blue ay siddeed guuldarro la kulantay xilli ciyaareedkan, halka 22 dhibcood nadiif ah ay ka hooseeyaan hoggaamiyaasha sanadkan horyaalka Premier League ee Liverpool.
Laakiin Ian Wright ayaa wuxuu sheegay in Man City oo ku wajaheysa Real Madrid wareega 16-ka tartanka Champions League bishaan, ay badbaadin karto xilli ciyaareedkeedan.
Haddaba Ian Wright ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “BBC” wuxuu ku sheegay:
“Mid ayaan dareemayaa taasoo ah haddii ay Man City ku guuleysanin Champions League inuusan u aheyn xilli ciyaareed fiican, laakiin haddii ay ku guuleysato waxaa loo tixgelin doonaa xilli ciyaareed wanaagsan”.
“Waxaan doorbidi lahaa inaan bilaabo inaan siiyo nasiino xiddigaha muhiimka ah, maxaa yeelay tani waa waxa ay tahay inay diirada saarto Manchester City”.
Pep Guardiola oo isagoo ah macalin labo jeer kula soo guuleystay Champions League kooxda Barcelona, ayaan waligiis ku haggoominin Manchester City inuu dhaafiyo wareega siddeed dhamaadka ee tartankan.
Yeelkadeeda, Manchester City ayaa Axada soo socota ku soo dhaweyn doonto Etihad Stadium kooxda West Ham United si ay u wada ciyaaran kulan qeyb ka ah kulamada 26-aad ee horyaalka Premier League.
De Jong: “Barcelona waxay ku guuleysan kartaa Champions League xilli ciyaareedkan”
Lukaku oo si weyn u ammaanay Zlatan Ibrahimovic kahor kulanka Milan Derby ee Toddobaadka soo socda